Ikhaya IZITOLO Zase-AFRAN FOOTBALL Abadlali bebhola le-Ghanian I-Jordan Ayew Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football nge-isidlaliso "Jo“. Indaba yethu yeJordani Ayew Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo bomshado, ukuphila komuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila kanye namanye amaqiniso awaziwayo ngaye.
Impilo nokuvuka kweJordani Ayew. Ama-Credits Wezithombe: I-Instagram, i-Twitter kanye ne-PremierLeague.
Yebo, wonke umuntu uyazi i-gameplay yakhe ethembekile namandla okuphatha ingcindezi. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abantu ababheka inguqulo yethu yeJordani Ayew's Biography ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
Ukuqala, UJordani Pierre Ayew wazalwa ngosuku lwe-11 lukaSepthemba 1991 esifundeni saseMarseille eFrance. Ungowesithathu ezinganeni ezine azalwa ngunina, Maha Ayew nakuyise u-Abedi Pele (owayengumdlali webhola lezinyawo ngaleso sikhathi).
Abazali bakaJordani Ayew u-Abedi noMaha. Ama-Credits Wezithombe: HappyGhana ne-Wikipedia.
Isizwe samaGhanian nesaseFrance sobuzwe obuNsundu esinemvelaphi yomndeni waseNtshonalanga Afrika ekuqaleni sakhuliswa esimeni semindeni ephakathi nendawo eGhana lapho akhulela khona nomfowabo omncane u-Andre Ayew kanye nomfowethu omncane u-Imani Ayew.
“Ngikhuliswe ngugogo nomkhulu wami eGhana ngoba umama wami kanye nomfowethu omdala ongizala naye wayehamba nobaba wami nomaphi lapho ayeya khona ehambisana nezidingo zomsebenzi wakhe webhola lezinyawo. Akuzange kufike kuze kufike ezinsukwini zokugcina zomsebenzi wobaba wami lapho ngavunyelwa ukuba ngilandele yena ”.
Wakhumbula uJordani ngokukhuliswa kwakhe.
UJordani Ayew wakhulela eGhana eminyakeni yakhe yobudala. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ngakho-ke, kwakungokwemvelo ukuthi u-Ayew osemusha wakhula ebuka Imidlalo yebhola kuthelevishini ukuthola isithombe sokubandakanyeka kukababa wakhe emsebenzini. Ukude nokubuka imidlalo, u-Ayew ngokwemvelo wayenikezwe ukudlala ibhola nomfowabo omncane kanye nabangane ngaphandle kokucindezelwa ukuba awuthathe ngokungathí sina umdlalo noma aphuphe ngokuba ngumdlali webhola onjengoyise.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngesikhathi u-Ayew eseneminyaka engu-9 ubudala, uthando lwayo lwemvelo ngebhola lwalusele lwaziwa nguyise wakhe - ngenxa yomsebenzi osondelene nawo owawuthathe isikhathi eside eFrance - wenza kwaba lula ukungena kwengane yakhe esikhungweni semfundo yentsha yaseLyon-Duchère.
UJordani Ayew wayeneminyaka engu-9 ubudala lapho eqala ukwakha umsebenzi wakhe eLyon-Duchère '. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Kwakusemcimbini wophiko lwentsha noma iklabhu yabafana lapho u-Ayew achitha khona iminyaka engu-6 efunda amakhono, ehlonipha inhlawulo yakhe yezobuchwepheshe futhi elayisha amabhuzu akhe elungele umsebenzi angazi ukuthi kuzomthathela izindawo ukuqala eMarseille.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
U-Ayew wayengumfana oneminyaka engu-13 kuphela ubudala lapho kufika amasosha ezinhlanganweni zentsha yaseMarseille efika emnyango. Yize uMarseille ebenomthetho obekade ufuna ukuthi abadlali abancane baphenduke iminyaka engu-15 ngaphambi kokujoyina i-academy yabo, iklabhu yaseFrance yagoqa eyabo imithetho yokuqhumisa lesi sibhamu esishayo futhi bembheka ngamehlo ejabulisayo embuka.
Kukhuphuka amazinga: isithombe esingajwayelekile seJordani Ayew eMarseille. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Lowo owayengumdlali webhola wenza ukuthi anyukele ezembeni zeqembu lokuqala lapho esayina inkontileka yakhe yokuqala noMarseille ngonyaka ka-2009. Waqhubeka nokwenza ikilabhu yakhe ukuthi ibambe ongezansi emzamweni wokushaya amagoli osize uMarseille aqopha ukunqoba kuka-2-1 uLigue 1 Lorient mhlaka 16 Zibandlela 2009.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Akunakuphikwa ukuthi u-Ayew wayenamathuba amaningi eMarseille futhi wakhula kahle kakhulu lapho ebolekwa kwiSochaux. Futhi akatholakalanga ukuthi alahlekelwe ngenkathi enesiprofetho sonyaka owodwa neLorient ngesizini ka-2014 kuya ku-2015.
Ngemuva kwalokho, kancane kancane u-Ayew waziphonsela kwalasha izinselelo zomsebenzi lapho ejoyina i-Aston Villa kodwa wangakwazi ukusiza ohlangothini lwesiNgisi ekugwemeni ukuhoxa. Akekho futhi owayengachaza ukuthi kungani iSwansea idolobha lahlatshwa umdlandla ngemuva kokujoyina ikilabhu.
Ukungena kukaSwansea ekuguqukeni akwakhulumanga kahle ngabagadli baleli kilabhu okubalwa no-Ayew. Isikweletu Sezithombe: Isibuko.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Ukuqhubekela phambili kwagcina kutholile izizathu zokumamatheka lapho ejoyina i-Crystal Palace lapho ebolekiswe isizini ka-2018-19 wanikeza abakwaGlaziers izizathu ezakhayo zokuthi ungumgadli ababemdinga futhi abamfanele. Ngenxa yalokho, akumangazi lapho iklabhu imemezela ukuthi ithole ukusayinwa kuka-Ayew kwisivumelwano seminyaka emithathu ngoJulayi 25 kuJulayi 2019.
UJordani Ayew usayine isivumelwano seminyaka emithathu neCrystal Palace mhlaka 25 kuJulayi 2019. Isikweletu Sezithombe: Instagram.
Ngokushesha isikhathi sokubhala, u-Ayew usethole indawo yakhe phakathi kwabagadli abahamba phambili baseCrystal njengoba kubonakale ekuphathweni kwebhola lakhe nasekubambeni ngokunikeza abavikeli ithuba ebhola. Yini enye? abalandeli sebeqala ukufudumala ku-Ayew njengoba bazi kahle kamhlophe ukuthi umgadli we-zero ukuze akwazi ukukhuphuka iqhawe uthathwe ekuzimiseleni kwakhe ukwenza okungcono ikilabhu. Abanye, njengoba besho, umlando.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Indaba yomsebenzi ka-Ayew odonsa kanzima empilweni, izindaba ezenzeka empilweni yakhe yothando zaqala ukuvela ngo-2015 lapho kusolwa ukuthi uthandana no-Amanda othile owaziwa ukuthi ungunkosikazi womlingani wakhe waseGhanian - Afriyie Acquah. Le mpikiswano yaqala ukwanda ngesikhathi i-audiotape evuthiwe kuthiwa isuka e-Amada, lapho evuma ukuthi uyintombazane ka-Ayew, amthandayo futhi acishe abe ngumkakhe.
UJoseph Ayew kusolwa ukuthi wayethandana nomuntu athandana no-Amriya unkosikazi ka-Afriyie Acquah. Isikweletu Sezithombe: DailyStar.
Yize u-Ayew - ngesikhathi sokubhala - eshade nentombi yakhe enhle washintsha waba ngumkakhe uDenise, akukho okuningi okwaziwayo ngesikhathi lapho izithandani ziqala ukuthandana noma zihamba ngendlela. Umshado wokuqala noDenise ubusisiwe ngezingane ezimbili. Kubandakanya nendodakazi encane eyaziwayo nendodana encane.
UJordani Ayew nonkosikazi wakhe uDenise nezingane ezinhle. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Cabanga ngobungcweti bebhola abambalwa ababheka umndeni wabo njengezibusiso, cabanga ngeJordani Ayew bese bebona amaqiniso ngamalungu omndeni womgadli aqala ngabazali bakhe abanothando.
Mayelana nobaba kaJordani Ayew: U-Abedi Ayew ungubaba kaJordani. Wazalwa ngomhla ka-5 kaNovemba 1964 futhi wasebenza njengomdlali webhola lezinyawo engxenyeni engcono yempilo yokuqala yaseJordani. Ubaba we-4 - ngesikhathi sokubhala - umqeqeshi oyinhloko nomongameli weqembu laseGhana lebhola lezinyawo iNania FC. Uma ngabe uyisibonelo esiphelele sobaba, u-Abedi useduze nezingane zakhe ikakhulukazi amadodana akhe amathathu awakhuthaza ukuba abe ngabadlali bebhola abaqeqeshiwe.
Isithombe esibuyayo sikaJordani Ayew noyise u-Abedi Pele. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nomama kaJordani Ayew: UMaha Ayew ungunina kaJordani. Njengomyeni wakhe, uMaha ungowomndeni waseNtshonalanga Afrika. Yize uMaha engumqondisi futhi enamasheya eNania Football Club, wenza isikhathi sokuba nezingane zakhe azisize ekukhuliseni. Uyaziqhenya nangokuthi bakhulele kuphi futhi abakaze bayeke ukubolekelela ngemali yabo engagodli.
Umama kaJordani Ayew nomfowabo u-Andre. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nezelamani zikaJordani Ayew: UJordani unomzukulu wakababa wakhe osekhulile okhonjwe njengo-Ibrahim Ayew kanye nezingane zakubo ezimbili ezincane ezibizwa ngo-Andrew Ayew kanye no-Imani Ayew. NjengoJordani, u-Ibrahim ungumdlali webhola oqeqeshiwe. Udlalela i-Europa FC njengomdlali wasemuva ozivikelayo.
UJordani Ayew umfowabo omdala ka-Ibrahim. Isikweletu Sezithombe: Facebook.
Ngakolunye uhlangothi, u-Andre naye ungumdlali webhola lezinyawo okhokhelwa ukuhweba kwakhe eSwansea City ngesikhathi sokubhala. Abafowethu bonke basondelene futhi babelana uthando olulinganayo noDadewabo Imani okuphela kwakhe oyimodeli yemfashini.
UJordani Ayew nodadewabo u-Imani nomfowabo u-Andre. Isikweletu Sezithombe: Kubilive.
Mayelana nezihlobo zikaJordani Ayew: Ukuqhubekela phambili empilweni yomndeni eseJordani Ayew, kuncane okwaziwayo ngookhokho bakhe ikakhulukazi umkhulu wakhe ongumama kanye nogogo nomkhulu wakhe. Unomalume ohlonziwe njengomdlali webhola lezinyawo ophambili - Kwame Ayew kanye nomshana obizwa nge-Inaya Ayew. Awekho amarekhodi akhona omalume womgadli nomzala wakhe ngenkathi umshana wakhe esazokhonjwa ngesikhathi kubhalwa le biography.
Umalume kaJordani Ayew Kwame. Isikweletu Sezithombe: Wikipedia.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Izici zobuntu ezichaza iJordani Ayew zezimpawu zeVirgo zodiac. Kubandakanya ukuzala kwakhe ngokuzikhandla, ukupha nokuba nethemba. Ngaphezu kwalokho, unesimo esihlekisayo futhi akambuli ngemininingwane ephathelene nempilo yakhe yangasese neyangasese.
Ngokuphathelene nezinto ezithandwa ngu-Ayew nezinto azithandayo, unemisebenzi eminingi yokuzijabulisa ehlanganisa ukulalela umculo, ukubuka ama-movie, ukuhamba, ukubona indawo kanye nokuchitha isikhathi nomndeni wakhe omnandi nabangane.
Ukubona kungenye yezintshisekelo nezinto zokuzilibazisa zeJordani Ayew. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Uyazi ukuthi iJordani Ayew inemali elinganiselwa ku- $ 2.3 million ngesikhathi sokubhala le bio. Izakhi zomnotho wakhe okhuphukayo zivela emiholweni nasemiholweni ayitholayo ngokudlala ibhola lezindiza ephezulu ngenkathi ihlaziya indlela yakhe yokuchitha imali eveza ukuthi uphila impilo kanokusho.
Izinkomba zokukhombisa impilo kanokusho ka-Ayew ifaka izithunzi ezahlukahlukene zezimoto ezibizayo azisebenzisayo ukuhamba ngomgwaqo waseLondon naseGhana. Ngaphezu kwalokho, umgadli unendlu encane ebizayo eGhana futhi uhlala efulethini eLondon.
UJordani Ayew ulandela eceleni kwemoto yakhe iMercedes. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso weJordani Ayew Ubuntwana Nama-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Wazi kahle kanjani uJordani Ayew ngale ndaba yakhe yobuntwana nokuthi yini ebhalwe ngaye kule bio? Hlala emuva njengoba Siveza amaqiniso amancane angaziwa noma angaziwa ngomgadli.
ISAHLUKO: U-Ayew ungumSulumane owenza inkolo futhi omkhulu enkolweni. Yize umgadli engahambisani nenkolo ngenkathi kuxoxwa naye, imigomo yakhe igxila ekuhlonipheni kwakhe uNkulunkulu nokuzinikela ku-Islam.
UJordani Ayew ungumSulumane osebenzayo. Isikweletu Sezithombe: Fypfanzine.
UKUTHEKA KANYE UKUQHAWULA: Umgadli udlala ngokuzithoba emidlalweni yeligi yebhola ongabhemi futhi ongaphuzi ngesikhathi sokubhala. Izizathu, kungani u-Ayew enyathela izindlela ezinempilo ezinjalo, ukuqinisekisa ukuthi umzimba uhlala usesimweni esifanele ukuphatha izidingo zebhola eliphezulu.
I-TATTOOS: UJordani Ayew uthanda ama-tattoos futhi unobuciko bomzimba obhalwe ngazo zombili izandla zakhe zangakwesobunxele. Kukholakala ukuthi umgadli - obude obungamamitha ayi-6, ama-intshi angu-0 - awunawo amanye ama-tattoos kunalawo asezingalweni zakhe ngoba ubengabanjiwe njengongaphezulu.
Uyakwazi ukubona ama-tattoos ezandleni zikaJordani Ayew nakwesandleni sokudla? Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iJordani Ayew Childhood Indaba Plus ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Crystal Palace Football Diary
Gareth Southgate Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Christian Benteke Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Septhemba 21, 2020
Usuku olushintshiwe: Mashi 28, 2018